Ikhaya lika-Coco (i-Tatami 2 yase-Japan, Isibhedlela Esiseduze neKolishi Lezobunjiniyela, i-Lakeview Room) - I-Airbnb
Ikhaya lika-Coco (i-Tatami 2 yase-Japan, Isibhedlela Esiseduze neKolishi Lezobunjiniyela, i-Lakeview Room)
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Sky
Igumbi lami liseduze neSikole Sezokwakha Nobunjiniyela Esifundeni sase-Jingyang, Idolobha lase-Deyang. Liyindawo yokuqala yokuhlala yasekhaya yesitayela sase-Japanese-Korea sokuqala esisezingeni eliphezulu eDolobheni lase-Deyang. Ngiyakuthanda ukuhamba kakhulu.Ngiye emazweni amaningi.Ngakhangwa kakhulu futhi ngashaqeka ngamagumbi abo ngesikhathi ngihlala ehhotela eJapan naseSouth Korea.Kuwuhlobo lwemfudumalo ihhotela elingakwazi nhlobo ukukunikeza . ukuphishekela yabo imininingwane kuyinto sibonwe abantu ojayelekileko. Ngaleso sikhathi, ngaba nomuzwa wokuthi le Homestay empeleni kwakuwukugcwaliseka ifasitela izivakashi ukuqonda idolobha. Ngakho-ke bengifuna ukuletha lesi sitayela esifudumele ekhaya e-Deyang, idolobha lakithi. Ngakho-ke, ngemva kokulungiselela cishe isigamu sonyaka, siye sahlola ngokucophelela yonke imininingwane yegumbi, futhi sazama konke okusemandleni ethu ukubuyisela ingqikithi yezindawo zokuhlala zaseJapane naseKorea. Manje ekugcineni sinehhotela lokuqala elidumile e-Deyang, "Ikhaya Le-COCO". (Uma le suite isivele ibhukhiwe, sicela uchofoze esithombeni sephrofayela sosokhaya ukuze ubuke amanye amasethi womsingathi wezindlu ezifanayo)
Ikamelo lami liyindlu ebuka ichibi elinokukhanya okuhle.Ntambama, ngijabulela ilanga futhi ngiphuze netiye ngasefasiteleni. Nokho, umehluko omkhulu ukuthi izinga lethu lokuhlanza liyindinganiso yehhotela lezinkanyezi ezinhlanu. Wonke amakhona ekamelo asulwa ngokucophelela, futhi zonke izinkinobho, amabhodi okulawula kude, namacushion athintwe ngezandla kuye kwabulawa amagciwane. Isikhathi sokuhlanza igumbi singaphezu kwehora elingu-1. Ngakho-ke, izivakashi eziza ekamelweni lethu zingaqiniseka futhi zichithe yonke iminithi ngokunethezeka. Lona umehluko wethu omkhulu kakhulu. Uma le suite isivele ibhukhiwe, sicela uchofoze esithombeni sephrofayela sosokhaya ukuze ubuke amanye amasethi womsingathi wezakhiwo ezifanayo)
Igumbi liseduze neDeyang College of Engineering and Technology kanye nebhilidi.Ibhulokhi iphephile, amasiko abantu alula, futhi indlu ayivalwa ebusuku.Iseduze kakhulu nezisebenzi zasemgwaqeni ezidayisa ukudla okulula kanye nezindawo zasemakhaya (5) imizuzu ngezinyawo), imizuzu 3 ngemoto esuka Metro, futhi imizuzu 3 ngemoto esuka Yonghui Isuphamakethe. imizuzu 8 ukushayela kusukela enkabeni yedolobha, ukuphila elula.
Cela umbungazi noma nini ukuze uthole usizo namacebiso okuvakasha.